कसले गर्ने मैथिली हस्तकलाको सम्वर्धन ? « NBC KHABAR
जनकपुरधाम । मैथिली चित्रकलालार्इ अझ प्रभावकारी बानाउँन स्थानीय स्तरदेखि नै संरक्षण र सम्बर्धन गर्न गराउन जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले जोड़ दिएका छन् । वरिष्ठदेखि कनिष्ठ कलाकारहरुको जमघटमा साहित्यकार कलाकार विजय दत्त मणिले मिथिला चित्रकलालार्इ यहाँ डलरसँग किनबेच भइरहेको आक्रोश पोखेका छन् ।
कलाकार विजयमणिले स्थानीय रुपमै यसको बजारीकरण गर्न सुझाब दिएका छन् । उनले मात्र विदेशीको लागि र पैसा कमाउन मात्र मिथिला चित्रकला कोरिएमा भविष्य समाप्त हुने बताएका छन् ।
जनकपुरमा जारी जनकपुर साहित्यकला तथा अन्र्राराष्ट्रिय नाटक महोत्सवको चौथो दिन जारी बहसमा मैथिली चित्रकला सिर्जनाको दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता माथि प्रकाश पर्दै मणिले सकारत्मक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट व्यस्थापन गर्नु पर्ने समयको माग रहेको बताए ।
बहसमा सहभागी कलाकार सुनैना ठाकुरले महिलाहरुलार्इ यस क्षेत्रमा निकै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको कथा सुनाइन् । ठाकुरले मैथिली चित्रकला सम्बन्धी मिथिलामा विद्यालय छ न सिक्ने ठाऊ छ कसरी प्रवर्धन गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
मैथिली चित्रकलाको सिर्जना र बाजारीकरणसम्मको जिम्मा अब सरकार र समाज दुबैले लिनु पर्ने आवश्यक्ता ठाकुरको भनाइ छ । मिथिला चित्रकलाको उत्पत्तिको कहिले र कसरी भयो सही यकिन गर्न मुस्किल हुने भारतीय कलाकार चंदा साहको कथन थियो ।